Filed under: Uncategorized — aqoonkaab @ 1:56 pm UNICEF Oo Soo Saartay Warbixin Kusaabsan Horumar Laga Sameeyay Ilaalinta Caruurta
Sida laga soo xigtay warbixin UN ay soo saartay salaasadii ina dhaaftay oo ciwaan looga dhigay United Press International,malaayuun caruura oo ku kala nool caalamka darafyadiisa ayaa lagula kacaa ka gacansi, faro xumayn, jid dil iyo ku shaqaysi.
“Warbixintani waxay isku soo ururisay markii ugu horaysay xoggo arimo badan ku saabsan sida faroxumayn jinsi, kaganacsi, guur caruurnimo, jidh dil caruurtu la kulanto, kushaqaysi, diiwaangalinta dhalasho, dhaqanka dhibka badan ee gudniinka fircooniga” Sidaa waxaa qoray Associated Press of Pakistan. Hadaba iyadoo qoraayaasha warbixintani ay qalinka ku adkeeyeen in xoogaa horumar ah laga sameeyey marka la eego qaar ka mid ah xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda caruurta, hadana iyadoo ay sidaa tahay waxay nimanka warbixintan soo saaray ay xuseen in inbadan oo ah xadgudubyada loo gaysto caruurta aynu mugdi kaga jirno maxaa yeelay xadgudubyadan waxaa loo sameeyaa si qarsoodi ah amaba si ka baxsan sharciyada wadamada u yaala.
Wakaalada wararka ee Reuters oo faalo ka bixisay warbixintan ayaa qortay ” Inkabdan kalabadh caruurta aroosadaha ahi waxaa ay ku nool yihiin Koonfurta Aasiya (South Asia), Koonfurta Aasiya waxay sidoo kale kunool inkabadan kalabadh caruurta aan dhalashadoodu diiwaan gashanayn taasoo caruurta ka dhigta kuwo kabaxsan xayn daabka ilaalinta ee Wadamada, una diidaysa inay helaan adeeg caafimaad iyo waxbarasho labadaba. Waxaa ay warbixintu qortay in kaliya.
” Bulsho horumar ma samayn karayso haddii xubneheeda ugu da’da yar lagu qasbo guur dagdag ah, la faro xumeeyo iyadoo laga dhigayo kuwo jidhkooda ka ganacsada, amabase loo diido xuquuqdooda aasaasiga ah, ” sidaa waxaa tidhi Ann Veneman oo ah Agaasimoha Fulinta ee UNICEF oo ka hadlaysay shir jaraa’id oo UNICEF ay qabtay. ” In lafahmo ilaa inta xad ahaan ay gaadhsiisanyihiin xadgudubyada lagula kaco xuquuqda caruurtu ayaa ah talaabada ugu horaysa ee lagu dhisayo bii’ad caruurta lagu ilaaliyo, looguna ogalaado fursadda ay kunoqon karaan kuwo gaadha horumar dhinacwalba ah.” ayay tidhi Ann iyadoo hadalkeeda sii wadata.
Abdirashid Ibrahim Yousuf